किन हुन्छ युरिक ए’सिड ? यसरी गर्नुहाेस् नियन्त्रण – Taja Khawar
किन हुन्छ युरिक ए’सिड ? यसरी गर्नुहाेस् नियन्त्रण
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०७८ समय: ०:५१:५४
युरिक एसिडको समस्या अहिले धेरै व्यक्तिकालागि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । युरिक एसिडले गाँजेपछि टमाटर, कोल्डड्रिक्स, खसीको मासु लगायतका मन पर्ने खान’पान त्याग्ने र कटौती गर्नुपर्दा कतिको दिनचर्या नै प्रभावित बनेको छ ।
किन हुन्छ युरिक ए’सिड ?
शरीरमा प्रोटिनको मेटाबोलिज्म भएर निस्कने तत्वलाई युरिक एसिड भनिन्छ । न्युक्लिक ए’सिड र प्यु’रिन ग्रुपको प्रोटिनबाट मात्र युरिक एसिड बन्छ । यो सामन्यतय पिसा’बबाट बाहिर निस्कन्छ । जब मृगौलाको छान्ने क्षमता कम हुन्छ र युरिक एसिड रहन्छ, तब त्यो हड्डीको जोर्नीमा गएर जम्मा हुन्छ । मृगौलाले
युरिक एसिड कम उत्सर्जन गर्दा पनि त्यो रग’तमा जम्मा हुन पुग्छ । उपवास वा तिव्र रुपमा तौल घटाउने चक्करमा पनि अस्थायी रुपले युरिक एसिडको स्तर बढ्न सक्छ । साथै, युरिक एसिड बढाउनमा मधुमेहको औषधी पनि एउटा कारण बन्न सक्छ ।
धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा सेवन गर्ने, अस्वस्थ्यकर खाना खाने, शारीरिक श्रम नगर्ने, वंशानुगत. मदि’रा सेवन गर्ने, रगत पातलो बनाउने औषधी सेवन गर्ने, उच्च रक्तचापको औषधी सेवन गरिरहेका
– युरिक एसिडबाट बच्न पर्याप्त पानी वा झोलयुक्त खानेकुरा सेवन गर्ने ।
– जति बढि तरल खायो युरिक एसिड पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छ ।
– खानपानमा सतर्कता अपनाउने, धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा सेवन नगर्ने ।
– रातो मासु, कलेजो, र क्सी, गेडागुडी जस्ता खानेकुरा नखाने ।
– हरेक दिन खानामा भिटामिन सि खाने ।
– नियमित व्यायाम ग’र्नुपर्छ ।
– स्वथ्य खानपान र जीवनशैली अपनाउने । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा
Last Updated on: August 8th, 2021 at 12:51 am